EzonaSoftware zoMenzi weSilayidi eziSimahla (iNkqubo yeDesktop, iiNkqubo zeMfono, kunye namaQonga akwi-Intanethi) | Martech Zone
EzonaSoftware zoMenzi weSilayidi eziSimahla (iDesktop yeSoftware, iiNkqubo zeMfono, kunye namaQonga aKhompyutha)
Lwesine, Matshi 11, 2021 Lwesine, Matshi 11, 2021 USammy Zhou
Isoftware yomenzi wesilayidi elungileyo ikuvumela ukuba uphuhlise imiboniso okanye iividiyo ezinomtsalane ngezixhobo ezahlukeneyo ezinokuthi zenziwe njengeetemplate, izandi, iziphumo, ukufomatha okubhaliweyo kunye neemilo, njl.njl. I-MPEG, MOV, .AVI okanye .MP4, njl. Ke banokufikelela ngokulula kwamanye amaqonga anjenge-Android, i-iOS okanye ikhompyuter. Ezi nkcazo zinokukunceda wenze izihlandlo ezikhethekileyo ezinje ngemihla yokuzalwa okanye imitshato engalibalekiyo, njengoko zibonelela ngeyona ndlela ibalaseleyo yokubonisa ubuchule bakho. Unokufumana ngokulula usetyenziso oluninzi kwi-intanethi ngokwenza izilayidi kwaye kweli nqaku, ndiza kudwelisa ezili-12 zazo!
Inxalenye 1: Amaqonga amaDesktop eDesktop aphezulu angama-4 asimahla
Ezona zixhobo zilungileyo zokwenza izilayidi ezidweliswe ngezantsi ziisoftware ezifanelekileyo zeWindows kunye neMac. Iinkqubo zokwenza isilayidi esineefoto ziyafana kakhulu: yongeza iifoto kuqala kwaye ungeze iaudiyo / umculo, ugcine kwiDVD okanye ikhompyuter okanye wabelane ngazo kwimidiya yoluntu.
1. Wondershare Filmora (ukusuka Wondershare Filmora)
I-Wondershare Filmora ayisiyo umhleli wevidiyo kuphela kodwa ikuvumela ukuba wenze izilayidi zesilayidi, zombini zabaqalayo kunye neengcali. Konke oku kwenza lula ividiyo kunye nemisebenzi yesilayidi yophuhliso kwiWindows nakwiMac. Njengesixhobo esenza izilayidi zomculo kunye notshintsho, amacebo okucoca ulwelo, njl.njl.
Ixhasa zonke iifomathi zefayile ezithandwayo kunye nesilayidi esinokwabelwana ngaso ngokuthe ngqo kumaqonga amajelo onxibelelwano afana neYouTube, Vimeo, njl.
Iimpawu ezininzi zenza ukuba uphuhliso lwenkcazo-ntetho lusebenze kakuhle.
Ujongano olunomdla ngezixhobo ekulula ukuzisebenzisa.
IFiloraora inethala leencwadi elakhelweyo elibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zomculo kunye nezandi
Inezinto ezininzi zomculo, amacebo okucoca ulwelo, izinto ezishukumayo, utshintsho kunye nokubekwa ngaphezulu.
Zonke iifomathi zefayile ezithandwayo ziyaxhaswa.
Ukulayisha ngokulula kumajelo asekuhlaleni.
2. Isakhi seSilayidi seDVD
I-Wondershare DVD Umboniso weSilayidi Isixhobo sibonelela ngesisombululo esinamandla sokukhulisa isilayidi esityebileyo seempawu kwiimfuno zobungcali. Abasebenzisi banokudibanisa ngokulula iividiyo kunye neefoto kunye ne-2D okanye i-3D yotshintsho. Iziphumo zevidiyo zinokwabiwa kwangoko kwiYouTube, iPod okanye iTV.
Kulula kakhulu ukusebenzisa esi sixhobo ngeempawu ezisetiweyo.
Inika ingqokelela enkulu yemifanekiso, ividiyo kunye neefomathi zomsindo.
Ukuhlela kunokwenziwa kwimidiya ngaphambi kokufaka indalo yokugqibela.
Ayivumeli abasebenzisi ukuba babelane ngentetho nge-imeyile okanye ngokuthe ngqo kwiiCD ezisebenzayo.
3 Freemake Ukuguqula ividiyo
Freemake Ukuguqula ividiyo Isoftware efanelekileyo yokwenza isilayidi esikhawulezayo. Iququzelela eyona vidiyo kunye nokuqokelelwa kweefoto ngeyona ndlela imangalisayo yeWindows PC. Ukuba ufuna ukudibanisa inani elikhulu lemifanekiso kwisilayidi sakho, iFreemake lolona khetho lufanelekileyo kuwe.
Ngokuqinisekileyo isimahla kwaye akukho bhaliso luyafuneka.
Iifomathi ezininzi zeefayile ezikhutshiweyo ziyaxhaswa.
Ikuvumela ukuba ulayishe iprojekthi yakho kwiYouTube ngqo.
Iingcaciso-ntetho zingadluliselwa ngqo kwiDVD.
Akukho templates okanye itemplate onokuthi uqalise ngayo.
Ungasebenzisa isiphumo esinye kuphela kwaye awunakongeza isicatshulwa kwimiboniso yezilayidi.
4 Movie Maker
UMenzi weMovie kaMenzi kaMicrosoft ikuvumela ukongeza ingqokelela yakho oyithandayo yomculo, iividiyo kunye neefoto kwimiboniso yesilayidi. IiVideos zinokurekhodwa ngokuthe ngqo kwi-webcam kwaye emva koko zidityaniswe kwiprojekthi. Kulula kakhulu ukusebenzisa iziphumo ezibonakalayo kunye noopopayi.
Elula kwaye kulula ukuyisebenzisa iqonga.
Inani elikhulu lotshintsho oluneziphumo ezibonakalayo.
Inika indawo yokwabelana ngemidiya yoluntu ngokuthe ngqo.
Ukusebenza okungapheliyo kuthelekiswa nezinye izixhobo ezikhoyo kwintengiso.
Ixhasa iifomathi zefayile ezinqongopheleyo.
Icandelo 2: Best Slideshows Online Software
Kulungiselelwe abo bafuna ukwenza iprizenteyishini ngaphandle kokukhuphela nasiphi na isoftware okanye ukufaka ii -apps, sifumene ubuncinci amaqonga ama-3 SIMAHLA akwi-Intanethi akuvumela ukuba wenze njalo.
4. Kancinci bonisa
Kancinci bonisa yinto eyaziwayo yemidiya yoluntu edityanisiweyo evumela ukwabelana ngokulula komxholo kwinethiwekhi yoluntu. Abasebenzisi banokungenisa iividiyo okanye imifanekiso kwiikhompyuter zabo zasekhaya okanye banokufikelela kwimithombo yeendaba ngokuthe ngqo kumaqonga eendaba ezentlalo njengoko kufuneka.
Inokwenza izinto ezininzi ngaphandle kokuphuhlisa nje imiboniso elula.
Inezinto ezininzi ezabelwana ngokwabelana noluntu.
Abasebenzisi banokungenisa iifayile zemithombo yeendaba kumaqonga amajelo eendaba.
Iividiyo zinokusetwa njengezabucala okanye esidlangalaleni.
Inika ukhetho oluninzi olwenziwe ngokwezifiso kutshintsho lwefoto kunye nesantya.
Akukho lula ukuyisebenzisa.
Iividiyo eziphuhlisiweyo azinakukhutshelwa.
FlexClip yi-100% yasimahla kodwa isanikezela uluhlu olubanzi lweempawu kubo bonke abasebenzisi. Akukho khuphela okufunekayo, njengoko isebenza kwi-intanethi kunye nayo yonke into eyakhelwe ngaphakathi izixhobo zophuhliso lwesilayidi. Abasebenzisi banokongeza iividiyo okanye umculo eqongeni kwaye iifayile kamva zingabelwana namaqonga eendaba ezentlalo.
Kizoa ngomnye umhleli wevidiyo owaziwayo kwi-intanethi ovumela ukufikelela ngokulula kwizinto ezimangalisayo ngaphandle kokubhalisa. Umhleli ophambili uxhasa oopopayi, utshintsho, kunye nefuthe kwaye unikezela ngeendlela ezininzi zomculo zokuphuhlisa iividiyo ezisebenzayo. Abasebenzisi banokwenza ngokwezifiso iinkcukacha zexesha, ubude, ubungakanani okanye indawo, njl, njengoko kufuneka.
Inxalenye 3: Best zokusebenza slideshow apps for Android
Abantu abafuna ukwenza i-slideshow nge-smartphone ye-Android, banokuzikhuphelela ezi zinto zilandelayo simahla umenzi wesilayidi.
1. Ifoto Ibali
Ibali lefoto Inokuphuhlisa imiboniso emikhulu kunye neemovie ngokulula kumanyathelo amathathu. Abasebenzisi bafuna nje ukukhetha iifoto kwizixhobo zabo, benze isilayidi ngotshintsho olufunayo kunye nemixholo, kwaye ekugqibeleni ugcine okanye wabelane ngokwendlela yabo.
Zininzi izihluzo, oopopayi kunye nemixholo engezantsi.
Inika iziphumo zokusombulula okuphezulu.
Isantya sokudlala sinokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabasebenzisi.
Linani eliqingqiweyo kuphela leefoto elinokukhethwa.
2. IPHGRAM - ividiyo ifoto yesilayidi
IPixgram sisixhobo esitofotofo, esilula nesimnandi esinokuqokelela ngokulula zonke iifoto kunye ukwenza umboniso wesilayidi onemvelaphi enomdla. Zininzi izinto ezinokwenziwa ngokwezifiso kulungelelwaniso lwesiphumo kwinkangeleko yakho.
Ukwabelana ngokulula kumaqonga eendaba ezentlalo.
Kulula ukuyisebenzisa ngeempawu ezininzi.
Inika amanqaku okuhlela asisiseko kunye neziphumo.
IFilmoraGO sisicelo esiphathwayo esibonelela ngamava omsebenzisi anokusetyenziswa ngokukuko ngokujongana nokusebenziseka ngokulula. Kulula kakhulu ukusika iividiyo kwaye unokufaka iifayile ezahlukeneyo kwimixholo enemixholo emininzi esele yenziwe. IFiloraoraGo ifumene ingqalelo ekhethekileyo kuluntu olusebenzisayo ngenxa yokuseta ngobuchule kunye nezixhobo zophuhliso.
Inika ingqokelela enkulu yemixholo.
Ineziphumo ezininzi ezipholileyo ezinje ngokubuyela umva, ukuhamba kancinci kunye nokuhamba ngokukhawuleza, njl.
Ngamanye amaxesha kuhamba kancinci ngeefayile ezinkulu.
Isigaba 4: EzonaSoftware zoMenzi weSilayidi eziSimahla ze-iOS
Ngaphandle kokusebenzisa i-Apple iMovie ukwenza izilayidi kwi-iPhone yakho, unokuzama ezi zinto zilandelayo simahla ukwenza izilayidi kwizixhobo ze-iOS.
Abo bafuna i-app ukwenza imiboniso enezinto ezizityebi nezinomdla kwi-iPhone yabo baya kuyifumana Isilayidi seLebhu Isicelo sinomdla kakhulu. Kulula kakhulu ukuqhubekeka nemifanekiso, umculo kunye nevidiyo usebenzisa esi sixhobo. Ngapha koko, izilayidi zobude naziphi na ubude zinokuphuhliswa ngokulula.
I-SlideLab sisixhobo esiphambili, esinamandla nesinomdla sokuphuhlisa isilayidi esinokusetyenziselwa iimfuno zomsebenzi kunye nezakho.
Intle kwaye kulula ukuyisebenzisa usetyenziso.
Kulula kakhulu ukongeza iziphumo ezinomdla.
Kunzima ukuhlela iifoto njengoko kufuneka.
Esi sicelo sivumela abasebenzisi ukuba badibanise iifoto zibe zizakhelo, kunye nomlinganiso wohlobo onokuwenza ngokwezifiso, ubungakanani kunye nombala, njl.
I-PicPlayPost ivumela abasebenzisi ukuba bakhethe ii-gifs, iividiyo kunye neefoto, njl.njl.
Inika umsebenzi olula wokudityaniswa kwevidiyo kwintetho.
Ukudlala ngokulandelelana kunye nokuvela ngaxeshanye kunokwenziwa kunye nezinto ezininzi ezizodwa.
Ivumela abasebenzisi ukuba bacinge ngaphandle kwebhokisi ngamalungiselelo eeseti ezininzi zevidiyo.
Ayiboneleli ngenkxaso esekwe kwi-iCloud yokuhambisa okanye ukugcina umxholo phakathi kwezixhobo ezahlukeneyo.
Enye yezona zinto zibalaseleyo esinokuzenza kwikhompyuter kukudala ifoto ebonisa imifanekiso, apho imifanekiso iskrola enye emva kwenye ngokuqhubekayo nangokuzenzekelayo. Sikubonise ezona webhusayithi zibalaseleyo zokwenza iifoto zesilayidi kunye nemifanekiso oza kuyibona kwi-Intanethi, ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa iinkqubo. Lixesha lokuba ukhethe oyithandayo kwaye uqalise!
tags: isoftware yesilayidi yesoftwareifilimunditshoii-apps zasimahlaumenzi wesilayidi sasimahlasoftware freefreemake isiguquli sevidiyokizoamicrosoftusetyenziso lwesilayidi esiphathwayoAmaqonga wesilayidi akwi-intanethiifoto yesilayidiibali lefotoiifotoUnokongezapixgramislabbkancincislidely bonisaslideshowusetyenziso lwesilayidiiqonga lesilayidiukuhlela ividiyoIsakhi somboniso wesilayidi seDVDisimangaliso filmora
USammy ungumthengisi wentengiso yedijithali kwaye uyakuthanda ukuthatha iifoto kunye nevidiyo. Uhlala ezama ukukhangela into entsha kumxholo wakhe kwaye uyathanda ukwabelana ngeengcebiso kunye namaqhinga kwintengiso. Isebenzela FlexClip, unomdla ngayo yonke into enxulumene nemveliso yevidiyo.
Uyilo lweCap: Uyilo lweeMifanekiso eziHlangayo ngokukhawuleza kuShishino, imisitho, iMidiya yokuNxibelelana nokunye!
Iindidi ezili-10 zeVidiyo zikaYouTube eziya Kukunceda ukhule kwiShishini lakho elincinci
Juni 13, 2021 ngo-9: 03 AM
USammy enkosi ngenqaku lakho, ungumbhali olungileyo ndiyalithanda inqaku lakho, kwaye ndisebenzisa usetyenziso lweSlideLab oku kuyamnandi, ndisebenzisa iVimory app ukwenza iividiyo zomboniso wesilayidi (https://apps.apple.com/us/app/vimory-photo-video-maker/id1359573092). Le app kulula ukuyisebenzisa, i-UI / UX enkulu kunye neempawu ezininzi.